Nezvedu - Fuyang Bestop Tumira Uye Export Ltd.
Fuyang Bestop Kunze Uye Export Ltd. inosimbiswa muna 2011 iine makore anopfuura gumi achiburitsa zviitiko. Isu tiri piyona wekusimbisa maChinese mahebhu anobata esp yekutengesa echinyakare mushonga wemakwenzi kune pasirese pasirese.
Isu tine yedu GMP yakasimbiswa fekitori, tinopa ZVINOKOSHA mahebhu kune vatengi vedu. Hofisi yedu iri muguta reFuyang, mudunhu reAnhui; workshop iri muBozhou, inozivikanwa sekumusha kweHuaTuo, musika mukuru wemiriwo weChina. Tanga tichizvipira kuhutano hwevanhu, uye tichiparadzira tsika dzechiChinese.
Fuyang Bestop inobata zvakanyanya mukubata mishonga yemakwenzi yeChinese, maruva akaomeswa echisikigo, mushoma wemiti, mafuta akakosha uye nezvimwe zvine hukama zvigadzirwa; yakatsaurirwa kutsvagisa, kusimudzira, uye kutengesa kweindasitiri yehutano. Isu tinovaka akasiyana mabheseni emiti mumatunhu akasiyana kuti tipe zvinhu zvese zvinotengesa kubva kwaakabva kune maoko evatengi zvakananga, hapana vepakati purofiti komisheni.
Kunze kwezvitupa zvine mukurumbira isu takaita seFDA, HALAL, uye ISO cert, zvinyorwa zvese zvinodiwa zvinogona kupihwa FREELY, senge chitupa chehuswa, hutano cert, fumigation cert, invoice yekutengesa uye kurongedza runyorwa, nezvimwe ...
Isu tiri vatengesi vakavimbika vekutengesa zvebhizimusi, vazhinji vatengi vedu vanoita bhizinesi ravo kuburikidza ne RETAIL webhusaiti seAmazon, Wish, Ebay nezvimwewo ... world uye uwane mukurumbira wakanyanya muindasitiri yedu izvozvi. Iyo yemhando yepamusoro, yakaderera mutengo uye yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi inogona kuve yakavimbiswa mushe. MOQ yakanyanya kuderera kunyangwe yekugadzirisa maitiro. Zvese zvigadzirwa zviripo OEM, gamuchirwa kuti ubvunze uye uwane SAMPLE YEMAHARA!
Tine maviri mazita anozivikanwa mumusika musika sezasi.
- Fuyang Bestop-- ipa yakanakisa & yepamusoro zvigadzirwa zvekukosheswa iwe!
- Goherbal-- Enda mishonga, Enda zvisikwa, Enda hutano!
- Titevere isu kutungamira hupenyu hwakareruka hune hutano!